Football Khabar » माने जो आफू फुटेको मोबाइल बोक्छन् र देशका गरिब जनतालाई खाना खुवाउँछन्
माने जो आफू फुटेको मोबाइल बोक्छन् र देशका गरिब जनतालाई खाना खुवाउँछन्
एजेन्सी, पुस २०
२०१९ को अन्तिम साता लिभरपुल एक खेलका लागि यात्रामा रहेका बेला टोलीका खेलाडी साडियो मानेको एक तस्बिर मिडियामा छायो । यात्राक्रममा फुटेको र पुरानो मोबाइलमा इयरफोन लगाएर गीत सुन्दै हिडिँरहेका बेला खिचिएको सो तस्बिर निकै चर्चित भयो ।
माने यसै पनि एक उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनलाई आफ्नो टिमका मात्रै नभएर विपक्षी टिमका समर्थकले पनि मन पराउँछन् । अफ्रिकन देश सेनेगलका खेलाडी माने अहिले युरोपियन फुटबलमा उच्च स्तरबाट खेलिरहेका छन् । २०१९ मा उनी सबैजसो ठूला व्यक्तिगत अवार्डको दाबेदार सूचीमा पनि थिए ।
डिसेम्बर अन्तिम साता खिचिएको सो तस्बिरका कारण माने फुटबल जगत्मा समाचारको शीर्ष बने । उनलाई माया गर्ने र मन पराउनेको संख्या झन् बढ्यो । हजारौंले उनको सामाजिक र परोपकारी कार्यको मुक्तकुण्ठले प्रशंसा गरे । सोही तस्बिर चर्चामा आएपछि उनका बारेमा थाहा नपाएका कति कुरा फ्यानले थाहा पाए । उनलाई सामाजिक सन्जालमा फलो गर्नेको संख्या झन् बढ्यो ।
सामाजिक सन्जालमा उनीबारे विभिन्न व्यक्तिले गरेका कमेन्ट यहाँ राखिएको छ । अहमद गाबेर अब्बास लेख्छन्– ‘माने म्यान् अफ् द पिपुल हुन् । उनको रङ कालो छ तर मन नीलो समुद्रको पानीझै सङ्लो । एक अनुकरणीय परोपकारी खेलाडी ।’
डेभिड चिलिमा नामका व्यक्तिले मानेलाई देशका असली नेता भनेका छन् । ‘म अफ्रिकन होइन । तर, म मानेलाई सेनेगलको असली नेता मान्छु । उनले फुटबल खेलेर देशका लागि जे गरिरहेका छन्, त्यो एक असल राजनेताले आफ्ना जनताका लागि गर्छन् ।’
मानेका एक अफगानी समर्थक अक्षय खानले निकै मन छुने कमेन्ट गरेका छन् । लिभरपुलको फेसबुक पेजमा उनले गरेको कमेन्टले जो कोहीलाई मानेप्रति आकर्षित बनाउँछ । उनले लेखेका छन्–
‘माने कमाइ र हैसियतका हिसाबले दुईवटा प्राइभेट जेट विमान चढ्न सक्छन् । १० वटा फेरारी गाडी चढ्न सक्छन् । दुई–चार ठाउँमा आलिसान बाङ्ला खरिद गर्न सक्छन् । दुई–चार वटा ठूला निजी कम्पनी चलाउन सक्छन् । करोडौंका गहना वा घडी लगाउन सक्छन् । पैसाले लिन सकिने अन्य सबैखाले भौतिक सुविधा उनी प्रयोग गर्ने क्षमता राख्छन् ।
तर, उनी यसो गर्दैनन् । बरु, आफ्नो कमाइको पैसाले देशमा पढ्न नपाएका बालबालिकाका लागि स्कुल बनाउँछन् । देशका गरिब जनतालाई खाना खुवाउँछन्, कपडा दिन्छन् । जसले आफ्नो कमाइको ५० प्रतिशत सामाजिक काममा खर्च गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । यस्ता खेलाडी मैले देखेको छैन, सुनेको पनि छैन ।’
एक इंग्लिस समर्थक मार्को बेकह्याम पनि आफ्नो पैसाले देशमा फुटबल रंगशाला बनाउने मानेको कर्मको कुनै मूल्य नरहेको बताउँछन् । उनको कमेन्ट यस्तो छ– ‘मानेले अहिले सेनेगलमा फुटबलको विकासका खेलाडी तयारी पार्न रंगशाला बनाइरहेका छन् । खेलाडी उत्पादन गर्न एकेडेमी नै बनाएर पैसा दिएका छन्, जहाँ मानेको कमाइको पैसाले उनको देशमा थुप्रै युवा खेलाडी तयार हुँदैछन्, उनीहरूले फुटबल सिक्दैछन् । म कालो छाला भएका यी धर्तीका सुन्दर खेलाडीलाई सधैं माया गर्नेछु ।’
केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै मानेले आफूले आफ्नो देशका खान–लाउन नपाएका मानिसका लागि सहयोग गर्न पाउँदा सबैभन्दा खुसी लाग्ने बताएका थिए । उनले आफ्नो पहिलो खुसी फुटबलमा र दोस्रो खुसी गरिबको सहयोग गर्नुमा रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘मलाई १० वटा फेरारी गाडी किन चाहियो ? मलई जेट विमान किन चाहियो ? मेरो आनन्द र खुसी भनेको त खाना–लाउन नपाएका मेरो देशका गरिब जनतालाई खाना खुवाउनु हो, शरीर ढाक्ने कपडा दिनु हो । स्कुल र हस्पिटल बनाउनु हो ।’
प्रकाशित मिति २१ पुष २०७६, सोमबार १६:५५
च्याम्पियन्स लिग जित्न इटालीका प्रशिक्षकले युभेन्टसलाई दिए यस्ता तीन सुझाव
पोर्चुगलले रोनाल्डोकै कप्तानीमा दोस्रो युरो कप जित्नेछ’
युभेन्टसमा अर्थुरले पाए ५ नम्बर जर्सी
च्याम्पियन्स लिग जित्न यी तीन भित्र्याउन क्लबलाई रोनाल्डोको सुझाव
बार्सिलोनाका नयाँ खेलाडी भन्छन्– ‘रोनाल्डोसँग खेल्न आतुर छु’
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोका नाममा बन्यो नयाँ रेकर्ड
युभेन्टसमा डिबालाको भविष्यबारे बोले नयाँ प्रशिक्षक
रोनाल्डोसहितका खेलाडी बिदा मनाएर युभेन्टस फर्किए
रोनाल्डो आधुनिक फुटबलका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुन् : सान्चो
युभेन्टसद्वारा उमेर ढल्केका खेलाडीको धमाधम बिदाइ : थप दुई खेलाडीको सम्झौता भंग
स्पेन र पोर्चुगलले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने घोषणा